XOG CUSUB: Maxaadan Ogeyn oo ka cusub Kiiska muranka Badda Kenya & Somalia,Maxaase iska bedelay Go’aanka Labada dalka? – War La Helaa Talo La Helaa
Cil-baaris ay sameeyeen Machadka horumarinta iyo Maamulka wanaaga ee Afrika ee loo soo gaabiyo “ DIGGA”,ayaa daah furay cil-baaris ku saabsan xadgudubka badeed ee ku Kenya ku sameysay Badda Soomaaliya.
Kulankan ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen quburo ku xeel dheer cilmi baarisna ku sameeyay Khilaafka taagan,sidoo kalena madasha ku sugnaa xubo Dowladda Goboleedka Puntland,qoraayaal iyo xubno kale oo wax badan ka og khilaafka Kenya iyo Soomaaliya ee salka ku haayo muranka badda.
Kulanka ayaa diiradda lagu saarayay qaabka ugu haboon ee lagu wajihi karo khilaafka dhanka badda iyo sidii looga soo saari lahaa warbixino taabanaya xaqiiqda iyo xadgudubka Kenya ay ku wado Soomaaliya.
Xeel-dheerayaashii madasha ku sugnaa ayaa Dowladda Federaalka ugu baaqay iney arrintaan la kaashato cid kasta oo xog-ogaal ah u ah,islamarkaana Villa Soomaaliya aanay isku koobin.
Badi dadkii kulanka ka hadlay ayaa isku raacay in Soomaaliya u baahan tahay Hiil ku aadan sidii loogu soo dhicin lahaa xaqeeda iyo laga Difaaco cadowga soo damaaciyay.
Kenya ayaa wali ku adkeysaneysa go’aankeedii ahaa ineysan gor-gortan ka galeyn lahaanshaha dhul-badeedka muranka uu ka taagan yahay,islamarkaana si adag u difaacaneyso.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Xisbiyada dalka ka jira ayaa meel adag iska taagay arrinta muranka badda Kenya,waxaana la isku afgartay inaan wada hadal iyo gor-gortan laga galin midnimada iyo Qaranimada dhuleed ee Soomaaliya.